Ciidanka Dowladda & Al-Shabaab oo ku dagaalamay Galgaduud | Warkii.com
Home warkii Ciidanka Dowladda & Al-Shabaab oo ku dagaalamay Galgaduud
Ciidanka Dowladda iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano hoos taga gobolka Galgaduud sida ay sheegayaan warbixino laga helayo halkaas.
Goobjoogayaal ayaa Caasimadda Online u sheegay in dagaalka uu ka bilowday deegaanka Bulacle ee ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana dhacay iska hor imaad uu ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh.
Dadka deegaanka waxey noo sheegeen in wali dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayaan la maqlayo, sidoo kalana aan la ogaan karin khasaaraha ay is gaarsiiyeen labada dhinac iyo midka soo gaaray dadka rayidka ah.
Ciidamada Dowladda ee ku sugan Galmudug ayaa bilaabay hawlgallo ay ku beegsanayaan Al-Shabaab kuwaas oo weerar ku qaaday madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor oo kasoo duulayay garoonka Ugaas Nuur.
Dagaalyahanada Al-Shabaab waxaa lagala wareegay deegaano hor leh ka hor inta uusan bilaaban dagaalkaan, waxeyna dhacdooyinkaan kusoo aadayaan xilli ciidamada Booliska Soomaaliya laga doonayo iney sugaan ammaanka goobaha doorashooyinka.
Laba goobood ayaa dowlad goboleedka Galmudug laga dhigi doonaa kuraasta lagu tartami doono iyadoo Al-Shabaab ay gobollada dhexe durba ka bilaabeen qalqal galinta ku aadan amniga deegaanadaas.
Previous articleIntee le’eg tahay awoodda militari ee gobolka Tigray oo ay is-hayaan Abiy Ahmed?
Next articleMadaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo qabtay shir jaraa’id oo ka yaabiyey
Faah faahino kasoo baxaya weerar ka dhacay masjid ku yaalla Guriceel